Mwenje wemwedzi: tamba mitambo yako yePC yemitambo uri kure | Linux Vakapindwa muropa
Iko kuvandudzwa kwekumhanyisa kwema network arizvino kwakabvumidza kuti itambwe kure nekumhanya vhidhiyo vhidhiyo pane server paunenge uchitamba pane mutengi, pasina lags yakawandisa. Ndiwo masevhisi akaita seNVIDIA GeForce Zvino, Google Stadia, nezvimwewo zvakatora mukana, asi iwe unofanirwawo kuziva nezve mamwe mapurojekiti akaita seMwedzi.
Sezvo nekushambadzira vhidhiyo, iwe unogona zvakare kuyerera emavhidhiyo mitambo yekutamba chero kwaunoda ivo, sezvazviri neSeam In-Home uye NVIDIA GameStream. Iye wekupedzisira muridzi weNVIDIA yekutamba ari kure pamakomputa neNVIDIA GPUs, uye yaimbove imwe nzira kune iyo Steam chikuva kune chero chishandiso.
Kuti utore mukana nezvirongwa izvi uye ugone tamba mutambo wako wePC waunofarira pane chimwe chigadzirwa kure, unogona kushandisa Mwenje weMwedzi, iyo iwe yaunowana mune akawanda repos uye software zvitoro zveiyo main distros.
Mwenje wemwedzi haungove chinhu kunze kwemahara uye yakavhurika sosi mutengi inoshandisa iyo NVIDIA protocol pasina kukosha kwekushandisa iyo NVIDIA Shield semunhu mutengi, achikuchengetera iyo Hardware uye uchikwanisa kuzviita kubva kumamwe makomputa uye nekuenderana kwePC, mapiritsi, uye kunyangwe mafoni emafoni ekuti utambe.
ari main maficha yeMwedzi mwenje ndeiyi:
Kubatana kwe yakaderera latency uye inosvika ku60 FPS kuitira kuti iwe ugone kutamba nehunhu hwakadzikama uye pasina iyo lag inoshungurudza zvakanyanya uye inosiya mutambo wakagwamba pane dzimwe nguva.
Kubvira kuendesa kune zvisarudzo zve kusvika ku4K, kunyange hazvo mamwe achigona kushandiswa kana zvishandiso zvako zvikasatsigira Nenzira iyoyo iwe unogona kuchinjisa kune zvaunoda kana kutamba pane yakasarudzika resolution kana ichiitendera.
Inoenderana ne kuwanda kwekudzora yemitambo yemavhidhiyo inozivikanwa, saka unogona kusarudza maitiro aunoda kudzora mutambo wevhidhiyo.
Zvakazara vakasununguka, pasina mari yekuwedzera.
Inayo browser yekuwedzera Google Chrome webhu kumhanya kubva kune chero chikuva chinogamuchira iyi browser, pamwe neazvino maapplication eApple neIOS, yeRaspberry Pi, yePS Vita, Samsung VR, uye yePc, uko kunozvarwa bhanari yeLinux inosanganisirwa.
Basa racho riri nyore, unomhanya mutambo wevhidhiyo paPC yako (iyo inofanirwa kuve nayo NVIDIA mifananidzo) iyo ichaita sevha, uye iwe uchave unokwanisa kudzora mutambo kubva kuchinhu chauri kuda kutamba uri kure, pasina kuve pamberi pePC yako ...
Mamwe mashoko - Mwedzi Wechiedza Webhusaiti
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Mwenje wemwedzi: tamba yako PC vhidhiyo mitambo uri kure
Kudzoka kwaStallman kuFree Software Foundation